Hauna Indaneti? Dzidza maitiro ekutora ako marekodhi kumba | Kubva kuLinux
Pandaive nekomputa pamba, ndaishandisa GNU / Linux pasina chero dambudziko kunyangwe usina internet kushandisa zvinyorwa.
Zvandakaita kutora kopi yemapakeji akaiswa pakombuta yangu yebasa uye nekuisa / kuigadziridza kumba. Pane akati wandei ekushandisa uye akasiyana kuita izvi, ini ndinokuratidza mamwe.
3 Uchishandisa dpkg-scanpackages
Yakanakira vashandisi ve Ubuntu. With APAOnCD isu ticha tora mapakeji ese atinawo mune cache APT in a .so pasina matambudziko. Kuiisa:
Kuti tishandise, isu tinongomhanyisa kunyorera uye nekuita zvarinotiudza nhanho nhanho. Hapana chakaoma.
Unogona kutora repository yako mu .iso (kana akati wandei, zvinoenderana nesaizi) Kwese kwaunoda iwe kuti uende Iwe unogona kugadzira iso mu CD y DVD.
Unogona kusunungura iyo .iso uye kuteedzera zvese zviri mukati kune folda, uye kugadzirisa kubva ipapo.
APAOnCD inoona kana iwe uine mapakeji nyowani uye ichivawedzera vachirasa ekare.
Kana iwe usina CD-RW o DVD-RW Uchatambiswa mari kana uri mumwe wevaya vanofarira kugadzirisa mazuva ese, kunyangwe iwe uchigona kuve neimwe nzira poindi 2 yezvakanakira.
Kana uchishandisa kukodzera-kupina nemapazi akati wandei (Kuedza, Sid, Ongororo), inogona kukupa iwe zvimwe zvikanganiso kana uchiisa zvinotsamira.
Iyi sarudzo yakanaka kune debian-kusvina. En Kuedzwa kweDebian Ini ndaive nemamwe matambudziko nekuti ini handina kuteedzera mapakeji kune yekuenda dura.
Sarudzo dzese apt-famba inogona kubvunzwa mubhuku rayo (murume apt-kufamba). Kugadziriswa kwayo kuri mu /etc/apt-move.conf uye isu tinofanirwa kushandura zvimwe zvinhu mariri, nekuti izvi tinovhura yedu yepamoyo mupepeti iyo faira:
Uye isu tinofanirwa kufunga nezve inotevera mitsara, ndiyo chete iyo yatinofanira kugadzirisa:
Izvi zvinokwana zvakakwana muzvirongwa.
Izvi zvichatiteedzera, yefaira ratasarudza, ese mapakeji ari mune yedu cache
Gadzira iyo chaiyo mamiriro egirazi nemapakeji atinawo mune cache.
Iyo inoronga iyo Main uye Contrib matavi chete mu Main, saka kana uchiwedzera kero kune sosi.list, isu tinofanirwa chete kuisa main isiri-yemahara.
Kana isu tine apt-pinning, tinogona kurodha pasi rimwe nerimwe bazi rakazvimirira
Parizvino handina kuwana chero.
Ongorora: Ichi chinhu senge kushandisa APAOnCD
Basa rechishandiso ichi kugadzira mini repo iwe yaunogona kutakura zviri nyore uye nekuisanganisira mu zvinyorwa.list, kubva kumafaira akadhirowewa kana iwo aunosanganisa wega.
Iyo inoshanda mode iri seinotevera: Kutanga gadza dpkg-dev
Kopa mafaera kubva kune apt cache kune iyo folda yaunosarudzwa kuti ushande nayo, ngatiti inonzi repo uye iri mukati / imba / mushandisi / repo /.
Iwe unogona zvakare kusanganisira iyo .deb iwe unoda
Iye zvino tinoenda kune yedu folda: repo (mune iyi nyaya).
Zvatiri kuita pano kuverenga ese mapakeji ari mukati / imba / mushandisi / repo / uye iyo faira inogadzirwa Mapakeji.gz neruzivo urwu; Zvichienderana nenhamba yemapakeji, ichave iri nguva yekupedzisa maitiro.
Kutanga kushanda neye nyowani mini-repo yakagadzirwa, nhanho inotevera ichave yekuwedzera kune iyo zvinyorwa.list, izvi zvinoitwa nekutevera nhanho idzi:
Nedu chinyorwa chinyorwa (iyi kesi nano):
Tinowedzera mutsara unotevera:
Izvo zvakakosha kuratidza, kufunga nezve, kuti mushure mefaira, iyo colon (:) uyezve imwe chete slash (/) yakaiswa, zvakare kuti mushure mekupedzisira dhairekitori, mune ino Desktop, hapana bhaa inoiswa mukati mayo, inotora nzvimbo uyezve mini-repo dhairekodhi (repo) ine slash kumagumo.
Nenhanho idzi, isu takatogadzira mini-repo yakagadzirira kutakura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Hauna Indaneti? Dzidza maitiro ekutora ako marekodhi kumba
Chimwe chinhu asi chekugovera chinoshandisa RPM?
Handisati ndambozviedza, asi iri zano / clue yekutangira kutarisa.
Nehurombo hatina ruzivo rwakawanda nerudzi urwu rwepakeji, asi zvirokwazvo pane musiyano kumwe kunhu.
Iko kune createrepro chishandiso chekugadzira zvinyorwa kubva kudhairekitori uko raibhurari iriko.
Tarisa uone http://blog.kagesenshi.org/2007/01/howto-creating-your-own-yum-rpm.html ndipo pavano tsanangura maitiro acho zvakanyatsotsanangurwa.
Pindura kune scaamanho
Imwe mukana ndeye kushandisa keryx, unogona kudhawunirodha mapakeji kubva kuLinux kana Windows, wozoiisa pakombuta yako pasina internet. Iyo inoshanda chete kune Debian uye Ubuntu.
Ini ndakaitawo imwe nguva yapfuura purogiramu kurodha mapakeji e linux pasina internet, asi ini ndaifanira kusiya U_U kuti nditange imwe projekiti yakanyanya kukwirisa, iyo yandichanyatso kupa pamberi pekupera kwegore 😀
Iwe waive musiki weSushi-huh? : -O Wow, zvakanaka. Ndakaishandisa pane akati wandei. Ichokwadi kuti kune zvimwe zvishandiso zvemifananidzo, ini ndichafanirwa kuunganidza rumwe ruzivo nezvazvo.
Ini ndinofunga chinhu chakareruka kwandiri chagara chiri chekununura mapakeji kubva ku / var / cache / apt uye kuapfuudza kuyeuke kana chero chinhu. Ini ndinosvika kumba, vhura koni yangu, enda kufolda uko mapakeji aripo uye isa zvese nekutaipa sudo dpkg -i * .deb
Pindura kuna drnocho
Mhinduro dzakanaka, ZVESE, kusanganisira Drnocho's, rakanakisa blog, ndinofara kwazvo pandinowana mablog anoshanda pasoftware yemahara, uye kunyanya kana iri pane yedu inodiwa Debian.
Ndatenda shamwari, zvinofadza kubatsira uye kudzorera zvishoma izvo zvese ruzivo rwatakapihwa nenharaunda 🙂
Handizive kana chichava kururamisa asi, kana tikashandisa apt-kufambisa tambo mune iyo terminal yaizoita seiyi:
sudo kukodzera kugadzirisa && sudo kukodzera kusimudzira && sudo apt-fambisa yekuvandudza
Kunyangwe ichinzwika isingawanikwe kana yakajeka, asi, kune vanhu vanogara vasingazive iyo diki diki hahaha.
Ndatenda neruzivo ... 😀
Pane chimwe chinhu chakawanda seSynaptic? Kwandiri ndizvo zvakanakisa
ndatenda neruzivo, asi mubvunzo unomuka aptoncd inogadzira iso nezvirongwa zvakadzorwa papc neinternet asi paPC isina internet yaizofanirwa kunge iine aptoncd asi kuiswa kwayo kunoitwa nepc ine internet ipapo, unodzosera sei iso inogadzirwa pasina aptoncd pane iyo pc isina internet.
Iyo posvo yakanaka ... Kune chero mhando yemidziyo iyi asi yakatarisana ne .rpm mapakeji?
Anthony A. akadaro
Mhoro. Unondipa zano rei. Ini ndine yakakamurwa toshiba komputa ine windows 7 uye Debian Linux 7 uchishandisa GRUB. Sezvo iri Graphics ATI x1200 dzakateedzana, ini ndakasara ndine bug uye ine chete tty skrini. Pakuisa sudo, maka rairo haina kuwanikwa. Ndakaedza kudhawunirodha zvinyorwa zvine Suhsi huh uye camicri cube, zvave zvisingaite. Pane imwe nzira here yaungandikurudzira.
Pindura kuna Antonio A
Itsva ISOs yeSabayon Linux v7